Google dia manova ny CAPTCHA nentim-paharazana ho an'ny reCAPTCHA | Androidsis
Google dia nanova ny CAPTCHA nentim-paharazana ho reCAPTCHA
Google dia nanambara izany nanova ny fomba nentim-paharazana an'ny CAPTCHA, izay ampiasaina hiantohana fa tsy bot ny mpampiasa, fa olona tena izy, dia nosoloina fomba tsotra kokoa izao.
Fantatra amin'ny hoe reCAPTCHARaha tokony manoratra tarehintsoratra alphanumerika fotsiny izao dia tsindrio fotsiny eo amin'ny boaty iray izay arahin'ny "Tsy robot aho", dia hanamarina kosa ireo mpampiasa fa tena olona izy ireo.
Ity kinova vaovao ity dia tena mahasoa ny mpampiasa, nanomboka mamonjy ilay asa mandreraka izy ireo fa imbetsaka ny fanekena ireo litera sy tarehimarika antsasaky ny voavily ary manoratra azy ireo mba hahafahany manohy ny fizotrany izay nihetsika.
Amin'ny teôria toa tsy dia milamina kokoa ny fipihana eo amin'ny boaty mba hisorohana ny bot, na dia nanao andrana aza i Google izay naseho fa misy ny botika mahavita manapaka ny litera CAPTCHA na dia matanjaka be aza ny encryption.
Nasongadin'ny mpitantana ny vokatra fa ity fomba ity mamela ny fiankinan-doha kely amin'ny fanoratana lahatsoratra diso, fa raha tsy afaka mamaritra i Google amin'ny alàlan'ity fomba ity raha bot ny olona iray na tsia, ny mpampiasa dia tsy maintsy mameno ny CAPTCHA nentim-paharazana, mba hamaritana raha tena olona izy.
Ity kinova reCAPTCHA vaovao ity dia hita ao amin'ny Snapchat, WordPress, ary Humble Bundle, saingy antenaina hiparitaka amin'ny tranokala maro hafa izy, raha vantany vao ekena ny API vaovao.
Raha mahazo fomba izay tsy dia miasa loatra ho an'ny mpampiasa izy ireo, manamora sy mankafy ny fitetezana, ary koa ny fanatanterahana asa samihafa amin'ny Internet, saika misaotra anao ny mpanjifa internet rehetra, satria iza no mbola tsy nanao zavatra ary tsy maintsy namerina ilay CAPTCHA manelingelina mihoatra ny indray mandeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia nanova ny CAPTCHA nentim-paharazana ho reCAPTCHA
Tsy manova ny captcha ho reCaptcha aho, efa ela ny reCaptcha, ny nataon'izy ireo dia ny manova ny reCaptcha fotsiny hoe "tsy misy captcha reCaptcha"
Toa nisy nanoratra lahatsoratra nefa tsy nampahafantarina tsara azy ...
[APK] Google News sy Weather toetrandro 2.2
Zoi the Escape lalao mampidi-doza sy tsy azo atao amin'ny Android